Xildhibaanada Galmudug oo maanta ansixiyay Golaha Wasiirada cusub - Tilmaan Media
Xildhibaanada Galmudug oo maanta ansixiyay Golaha Wasiirada cusub
Xildhinaabada Barlamaanka ee Dowlad-gobooleedka Galmudug oo maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta maamulka galmudug ayaa waxa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen golaha Wasiiradda cusub ee uu dhawaan soo magacaabay Madaxweyene Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor ).
Kulanka golaha maanta waxaa soo xaadiray 78 mudane ee ka tirsan Barlamaanka dhammaan waa ay ansixiyeen.
Sidoo kale munaasabada waxaa ka qeyb-galay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (qoor-Qoor) Madaxweyne ku xigeenka Cali Daahir Ciid, Guddoomiyaha Barlamaanka Galmudug Mudane Maxamed Axmed Gacal iyo ku xigeenadiisa .
Dhammaan tirade golaha Wasiirada ay maanta meel mariyeen Barlamaanka ayaa ka koobnaa 61 waxaana isla munaasabada lagu dhaariyay 25 Wasiir, 25 Wasiir ku-xigeeno iyo 11 Wasiiru Dowle.
Waxaana sidoo mkale ay Madaxda sare ee Galmudug kula la dardaarmay Wasiiradaan inay sidii loogu talagalay ugu adeegaan shacabkooda waxaana ay u rajeeyey inay ka soo baxaan waajibaadka loo ekmaday.
Xaalado Cusub Oo COVID19 Ah oo Soomaaliya Laga Diiwaan Geliyay